Guyyaan filannoo federeshinii kubbaa miilaa ammas dheerate
Filannoon pirezidaantummaafi koree raawwachiiftu hojii adeemsifamuuf karoorfame gaaffii, Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Addunyaa(FIFA)n dhiheesseen yeroo arfaffaaf dheerachuusaa Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa beeksise.
Guyyaa filannoon itti adeemsifamu Amajjii 5 bara 2010 Naannoo Affaar, magaalaa Samaraatti taasifama jedhamee beellamni qabamus gara Guraandhala 24 bara 2010tti kan darbe ta'uusaa federeeshinichi addeesseera.
Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Addunyaa(FIFA) tibbana xalayaa Federeeshina Kubbaa Miilaa Itoophiyaaf barreesseen akka ibsetti, filannoo dura federeeshinichi adeemsa isaarratti dhimmoota qoratu waan qabuufi guyyichatti bakka bu'oonni 'FIFA'fi 'CAF' sababa waancaa kubbaa miilaa Afrikaa adeemsifamaa jiruuf argamuu waan hindandeenyeef guyyaan qabame akka dheeratu gaafateera.
Filannoon pirezidaantummaafi koree raawwachiiftuu federeeshichaa adeemsifamuun kan isarra ture Sadaasa 1 bara 2010 ta'uu kan beekamuudha. Ta'us, yaa'ii mana maree federeeshinchaarratti gaaffii miseensonni dhiyeessaniin filannichi Mudde 16 bara 2010 akka adeemsifamu murtaa'us Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa ammoo gara Amajjii 5 bara 2010 dabarsuunsaa kan yaadatamuudha.
Guyyaan filannoon itti adeemsifamu akkaataa kanaan ammas si'a arfaffaaf fagaachuunsaa jaalattoota kubbaa miilaa, miseensotaa mana maree federeeshinichaafi kilabootaa biyyattii gaddisiisuu akka danda'e hubatameera.
Torban kana/This_Week 43539
Guyyaa mara/All_Days 1468319